Modeela COC Bara 2012 Muummee Saayinsii Qindaa'aaf - Jimma College of Teachers Education
Modeela COC Bara 2012 Muummee Saayinsii Qindaa’aaf
1 Comment	/ COC Models / By admin
Take COC Model Exam Online
Created on September 07, 2020 By admin
sq 1. Jiini Teempireechera daangaalee lamaan yommuu ho’aa fi yommuu qorraa hammamii hanga hammamii giddu qabaatti?
2340c hamma -170c
5000c hamma -100c
2540c hamma -150c
3840c hamma -170c
sq 2. Dawwitiiwwan lama gidduu isaniitti kofa 120 digirii uumaniiru (Fakii 1.1 ilaali). Xiyyi ifaa irra kofa battallee 65 digorii daawwiitti M1 irra buufate. Erga xiyyi ifaa daawwitiiwwan lamaaniin balaqqeessa’ee booda, kofa xiyyi ifaa ijaajjoo daawwitii M2 waliin uumu meeqa taa’a?
sq 3. Waantoon 4cm dheeratu tokko leensii gophaa kan dheerinni fuulleffannaa isaa 30cm ta’e fuldura kaa’amee jira.Fageenyi waantoo leensii irraa 15cm yoo ta’e,fageenya fakkaatti fi guddiftuu wal duraa duubaan meeqa ta’a?
-30cm fi 2
-10cm fi 2/3
-30cm fi 3/2
-10cm fi 3/2
sq 4. Balbiiwwan waattii adda adda qaban sadii baatirii waliin daandii sirriin wal qabsiifamaniif,
Volteejiin tokko tokkoo balbii keessatti cophuu wal-qixa.
Kaarentiin tookko tokkoo balbii keessa wal-qixa.
Ittisoon tokko tokkoo balbii keessa wal-qixa.
Aango elektiriikii tokko tokko isaan fayyadaman wal-qixa
sq 5. Saatalaayitiin Pilaanetii hanga Mp = 1.2 x 1025 Kg fi raadiyesii 8 x 106 m qabu irraa 4.8 x107m fagaatee naanna’aa jira yoo ta’e, saffisa saatalaayitii kanaa shallagi. (G= 6.67 x 1011Nm2/Kg2.)
sq 6. Fageenyi gidduu-galeessaa biiftuu fi merkurii jidduu 5.79x107km dha. Merkuriin biiftuutti al takkaa naannoftee xumurudhaaf guyyaa meeqa itti fudhata? (Pereediin dachee waggaatokko, fageenyi gidduu-galleessaa dachee fi biiftuu jidduu = 1.49x108km)
sq 7. Kaappaasiitaroota sadeen C1=6μF,C2=1μF fi C3=2μF akkaataa sarkiiyuutii Fakkii 1.2. irraattiwal -qabsiifamaniif kaappaasiitaansii dimshaashaa shallagi.V=24V
sq 8. Xiyya kaatoodii keessa kaarentiin 30μA kan yaa’u yoo ta’e, elektiroonii meeqatu sekondii 40 keessatti iskiriinii kaatoodii kanaa rukkuta?
sq 9. Shiboon Aluuminiyeemii karentii baatu diyaameetiriin isaa 0.8m ta’ee fi dherreen elektirikii shiboo sana keessaa 0.64V/m yoo ta’e kaarentii hangamiitu shiboo sana keessa yaa’a? (ρAl=2.63×10-8Ωm)
sq 10. Dandeettiin ho’a addaa bishaanii tokko kaalorii irra tokko giraamii irra tokko digirii selshiyeesii (1cal/gm0c) dha. Kana jechuun bishaan hangi isaa 10gm ta’e tempireechera isaa 100ctti oliguddisuuf hamma annisaa ho’a kaalori meeqatu barbaachisa?
sq 11. Mee dacheen naannoo biiftuu tilmaamaan daandii geengawaa irra naannofti. Humni harkisaa biiftuu fi dachee gidduu hammami?
(G=6.67×10-11Nm2/kg2, ms=1.991x1030kg, me=5.98x1024kg, r=149.6x106km)
sq 12. Shiboon elektiriikii tokko yoo maal ta’e ittisoo gadi aanaa qabaata?
Dheeraa fi furdaa
Dheeraa fi qallaa
Gabaabaa fi furdaa
Gabaabaa fi qallaa
sq 13. Balbiiwwan waattii adda adda qaban sadii baatirii waliin daandii sirriin wal qabsiifamaniif,
sq 14. Tiraakteriin tokko guyyaa ho’a keessa gaasii liitirii 37000L baatee ture tokko bakka ture irraa kilomeetira heeddu deemuun gaasii bakka tempireecharri isaa isa duraa irra 23k gadi ta’e geesse gaasii ofirra buuse.Gaasii liitirii hagamii qabatee bakkasana ga’e?(koffisheentiin babal’achu qabee gaasicha 9.5×10-4/0c fi koffisheentii
babal’achuu kal tokke baatoo tiraakii11x10-6/0c).
sq 15. Seerri__________kan ibsu kaareentiin marsaa cufaa keessatti uumamu kallattiin isaa yeroo hunda jijjirama isa uume ni morma.
sq 16. Kaarentiin elektirikii safartuu ____ ti
Humna chaarjii tuqaa tokko irra sochoosun dabarsu
Hamma chaarjii yeroo yuuniitii tokko keessatti tuqaa tokko irra socho’uun darbuu
Ittisa sochii chaarjii tuqaa kenname irra
Anniisaa chaarjii tuqaa kenname keessa sochoosuuf oolu
sq 17. Qindoominni shiboowwan elektirikii mana keessa yeroo hunda daandii waltarree irra ta’a.Bu’aan qindoomina kanaa maal?
Vooltajjiin tokko tokkoo birkii keessaa vooltajji maddaan walqixa.
Yoo birkiin tokko banaa ta’e kanneen hafan hundi sirriitti ni dalagu
Ittisa xiyyeeffanno keessa osoo hin galchin birkii hunda keessa kaarentii walqxa ta’etu darba
sq 18. Charjiin 180C daqiiqaa tokko keessatti tuqaa tokko irra yoo darbe, kaarentiin shiboo keessaa meeqa ta’a?
sq 19. Kutaa ija namaa kan fiilmii kaameraa keessaan wal simu danda’u isa kami?
Murteessoo ifaa (Ayirasii)
sq 20. Kanneen armaan gadii keessaa fakkaattii yaadoo ilaalchise sirrii kan ta’e isa kami?
Wantoo irra guddoo dha
Wantoo irra xiqoo dha
Footoograafii (fakkii) isaanii kaasuun ni danda’ama
sq 21. Kubbaan tokko daawitii diriiraa fuuldura 40cm fagaatee ka’ame. Fageenyi kubbaa fi fakkaattii gidduu jiru hammam ta’a?
sq 22. Namni muda qaroo dhi’oo qabu gosa fuullee ijaa isa kami ka’achuu qabu?
Leensii fuulleffanna lamee
Leensii goopha’aa lama
sq 23. Halkanii fi guyyaan akka ta’uuf sababa kan ta’e:
Sochii martoo lafti siiqqee ishee irrtti taasiftu
Sochii martoo addeessi siiqqee ishee irrtti taasiftu
Haqaaqama lafti siiqqee martoo irraa qabdu
Murteessuf rakkisaa dha
sq 24. Kanneen armaan gadii keessa kamtu sirrii dha?
Lafti handhuura(gidduu) sirna soolaariiti
Lafti darba hamma ta’e geenga’a irra socho’un addutti marsiti
Lafti sochii siiqqee ishee irraa yeroo hunda guyyaa 28 kessatti taasifti
sq 25. Haqaaqama lafti siiqqee martoo irra qabdu kan inni taasisuu danda’u isa kami?
Naannoolee lafaa garaagaratti garaagarumma yeroo ifa guyyaa argatanii taasisa
Garaagarummaa haala qilleensaa Naannolee lafaa garaagaraatti taasisa
Waqtiilee adda addaa taasisa
sq 26. Gaaddiddeessun aduu kan ta’u danda’u yommuu kami?
Addeessi aduu fi lafa gidduu ooltu
Ifti addessa irra balaqqeesa’u hin jirre
Lfti Addeessaa fi Aduu gidduu ooltu
Aduun Addeessaa fi Lafa gidduu ooltu
sq 27. Adeemsa saayinsaawwa keessatti dhaawwatin inni jalqaba
Rakkoo addan baasuu
sq 28. Ibsa hedduu qinda’aa dhugaa irratti hunda’uun taateewwan ibsuuf sababeeffame,kan amma illee dalagaa mirkanneffanna barbaadu isa kami?
sq 29. Kanneen armaan gadii keessaa mit-dabarsoo elektirikii kan ta’e kami?
sq 30. Chaarjiin 600C yeoo hammammif dabarsoo keessa yoo yaa’e kaareentii 3A uumamaa?
sq 31. Qindoomina daandii sirrii keessatti walqixaa kan ta’e
Garaagarummaa caalmaa kuufamaa
sq 32. Anniisaan kan irraa argannu
sq 33. Kanneen armaan gadii keessaa of-eeggannoondhiibbaa/miidhaa elektirikiin dhufu hambisuuf fudhatamuu qabu kami?
Shiboo elektirikii qullaa ta’e pilaastikaan uuwwisuu
Waantoota eleektirikii qaban bakka ijoolleen hin geenye kaa’uu
Waantoota eleektirikii qaban yeroo roobaa tuquu dhiisuu
sq 34. Yommuu balboonni daandii waltarreen walqabsiifaman kanneen armaan gadii keessaa kan balboota hunda keessatti walqixaa ta’e kami?
sq 35. Anniisaan eleektiriikii haroomfamu kan irraa argamu
sq 36. Dandeettiin ijji keenyaa boca leensii isaa jijjiiruun wantoota dhiyoo fi fagoo arguuf taasisu maal jedhama?
sq 37. Yommuu umuriin namootaa dabalaa adeemu rokkoo qaroo dhiyootu isaan mudata.Namoota kanaaf leensii ijaa gosa kam akka godhatan gorsita?
Leensii sassaabduu ifaa
sq 38. Ifni yaa’a tokko irraa gara yaa’a birootti yoo darbu haala kam keessatti saffisa guddaa irraa gara yaa’a saffisa xiqqaa qabuutti darba?
Fuullee irraa gara qillennsatti B
Cabbii irraa gara bishaanitti
Pilaastika irraa gara qilleensatti
Vaakiyuumii irraa gara bishaanitti
sq 39. Amaloota ifaa keessaa isa kamtu fuullee keessatti fakkii kee akka agartuuf sigargaara?
sq 40. Anniisaa ilaalchisee kamtu dhugaa dha?
Aduun madda j anniisaa alqabaati
Anniisaan hin uumamuus hinbarbadaa’uus
Pilaaneetoonni anniisaa ifaa gara anniisaa keemikaalaatti jijjiiru
sq 41. Sirna soolaarii keessaattii pilaaneetiin Meerkuriitti aanee jiru isa kami?
sq 42. Aduun irra jireessan kan irraa tolfamte
Oksijiinii fi Hayidiroojiinii
Hiiliyeemii fi Hayidiroojiinii
Hiliyeemii fi Nayitiroojiinii
Karbeenii fi Oksijiinii
sq 43. Sababa dacheen sochii naannoo biiftuutti taasistuun dheerinni guyyaa fi halkanii iddoo hundaatti walqixaa kan ta’u yoomi?
sq 44. Yommuu addeessi lafaa fi aduu gidduu ooltu maaltu ta’a?
Deebiin hin kennamne
sq 45. Faayidaan saatalaayitii namtolchee
Haala qilleensaa ittiin tilmaamuuf
sq 46. Dacheen kan naannooftu
Baha irraa gara Lixaa
Kaaba irraa gara Kibbaa
Lixaa irraa gara Bahaa
Kaabaa irraa gara Bahaa
sq 47. Qabiyyee qilleensaa kan hintaanee isa kami?
sq 48. Ruqoolee qilleensaa keessaa kan biqilootni fayyadamanii soorata isaanii ittiin qopheeffatan kamii dha?
sq 49. Faalkaalee maaterii keessaa kan suudoowwan isaanii baayyee walirraa fagaatu kami?
sq 50. Tuuta armaan gadii keessaa kamtu wantoota qulqulluu dha?
Bishaan, Warqii, Sukkaara
Qilleensa, Dhiiga, Aannan
Biiraa, Kaarboonii, Shayi
sq 51. Elementoota armaan gadii keessaa kan sibiila ta’e kami?
sq 52. Elementii armaan gadii keessaa kan gariin dabarsoo ho’aa fi elektirikaa ta’e kami?
sq 53. Atoomiin elementii”X” pirootonii 23 fi niwutironii 26 qaba. Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqa ta’a?
sq 54. Kanneen armaan gadii keessaa amaloota makaa kan hintaane kami?
Ruqooleen isaanii reeshoo dhaabbataa ykn murta’aa qaba
Mala fiizikaalaan adda bahuu danda’u
Adeemsa fiizikaalaan uumamu.
Ruqooleen isaanii maalummaa isaanii otoo hin jijjiirin argamu
sq 55. Kanneen armaan gadii keessaa kamtuu makaa dha?
sq 56. Makaa ayoodinii fi cirrachaa gargar dhiluuf kan fayyadu kami?
sq 57. Amala bishaan ilaalchisee kamtu sirrii dha?
sq 58. Kan armaan gadii keessaa kamtu kompaawundii miti?
sq 59. Oksaayidii armaan gadii keessaa kan adda ta’e kami?
sq 60. Kan armaan gadii keessaa oksaayidii sibiilaa uumuu kan danda’u kami?
sq 61. Asiidiin dhugaatii lallaafaa keessatti argamu maal jedhama?
Aseetiik asiidii B
sq 62. Kanneen armaan gadii keessaa oksaayidii haayidiroojiinii kan ta’e isa kami?
sq 63. Wantoota armaan gadii keessaa kompaawundii kan hintaane isa kami?
sq 64. Burcuqqoo tokko bishaan cabbiin yoo guttee fi cabbichi bishaan keessaa yommuu baqu qabeen bishaanichaa maal ta’a?
Cabbiin yommuu baqu bishaan burcuqqoo irra darbee dhangala’a
Cabbiin yommuu baqu qabeen bishaanicha burcuqoo keessaa hinjijjiramu
Cabbiin yommuu baqu qabeen bishaanichaa xiqqoo gadi bu’a
Waan tokkooyyuu adda hinbaafanne, sababiin isaas bishaanicha nan dhuga yookiin osoo wanni tokko hintaaneen dhiisee deema.
sq 65. Mana yaalii keessatti yaalii osoo hin gaggeessin dura maqaa fi bifa meeshaalee mana yaalii beekuun faayidaa maalii qaba?
Qormaata yaalii irratti qabxii guddaa galmeessisuuf
Yaaliin dura meeshaalee yaaliif barbaachisan daftee salphaatti argachuuf
Yaaliin dura meeshaalee yaaliif barbaachisan qulqullaa’uu isaanii mirkaneeffachuuf
Ajaja mana yaalii sirritti hordofuuf
sq 66. Bishaan qabeen isaa 50ml ta’ee fi zayitii nyaataa qabeen isaa 50ml ta’e yoo walitti makte wal hin fudhatan (wal keessatti hin bulbulaman). Kun kan agarsiisu
Poolaaraa’ummmaa garaagaraa qabaachuu isaanii
Qabxii danfinaa garaagaraa qabaachuu isaanii
Rukkina garaagaraa qabaachuu isaanii
Foolii garaagaraa qabaachuu isaanii
sq 67. Adeemsota armaan gadii keessaa kan oksaayidii beezawoo qopheessuu dandeessisu isa kami?
Kaarboonii oksijiinii gahaa keessatti gubuun CO2 uumuu
Maginiiziyemii oksijiinii gahaa keessatti gubuun MgO uumuu
Salfarii Oksijiinii gahaa keessatti gubuun SO2 uumuu
Naayitiroojinii oksijiinii gahaa keessatti gubuun NO2 uumuu
sq 68. Faalkaaleen fiizikaalawaa maaterii baay’ee beekamoo ta’an jajjaboo, dhangala’oo fi gaasii dha. Kan armaan gadii keessaa waa’ee dhangala’oo dhugaa kan ta’e kami?
Dhangala’oon qabee murtaa’a qabu .Garuu boca murtaa’a hinqaban
Dhangala’oon boca murtaa’a qabu. Garuu qabee murtaa’a hinqaban
Dhangala’oon boca fi qabee murtaa’a qabu
Dhangala’oon boca fi qabee murtaa’a hinqaban
sq 69. Bishaan qulqulluu bishaan garbaa irraa argachuuf maal gochuu barbaachisa?
Irra deebiin kiristaaleessuu
Mala distileeshinii fayyadamuu
sq 70. Mala saayinsii barsiisuu barattoota mana baruumsa sadarkaa tokkofaatiif kan hin jajjabeefamne isa kami?
Barattoonni karaa saayinsaawan akka yaadan barsiisuu
Ofiin barachuu keessatti barattoonni si’aayinaan akka hirmaatan gochuu
Barattoonnii dandeetti rakkoo furuu fi yaada-rimee bu’uura akka gabbifatan gargaaruudhiisuu
Marii barattoota fi hojii garee barattootaa jajjabeessuu
sq 71. Adeemsa baruu- barsiisuu fooyyeessuu keessatti karoora hojii ifa fi gabbataa ta’e qopheessuun beekumsa kamin walqabata?
sq 72. ” Barsiisaa/tuu gaariin kan jireenya isaa/ishee guutuu baratu/ttu” kun kan agarsiisu barsiisan/tuun keemistirii gahumsa qabu /qabdu
Barattoota hunda haala walfakkaataan kan keessummeessu/itu
Barattoota biratti gaarii ta’ee argamuu kan yaalu/tu
Fedhii barattootaa guutuuf carraaqqii cimaa kan godhu/tu D
Caalaatti waan tokko beekuu fi of foyyeessuuf kan taattaafatu/ttu.
sq 73. Amala iyyaafannaa walitti fufaa kan hintaane isa kami?
Adeemsa walitti fufaa ta’een fooyya’iinsa barachuu barattootaa irratti odeeffannoo walitti qabachuu dha
Galmaa fi kaayyoo sirna barnootaa waliin hindeemu
Barattoota barnoota isaanii irraatti fooyyeessuuf maal akka hojjachuu qabaniif duubdeebii ijaarsaaf yeroon kenna.
Hunduu deebii dha
sq 74. Kaayyoolee murna qaama sammuu barsiisuuf malli baay’ee filatamaa ta’e isa kami?
sq 75. Kanneen armaan gadii keessaa amala fiizikaalaa wantootaa kan hintaane isa kami?
Si’aayina walnyaatinsaa B
sq 76. Mata-duree barannoo “qilleensi iddoo ni qabata” jedhu barattoota barsiisaa jirtuuf ifa taasisuuf adeemsota armaan gad ii keessaa filatamaa kan ta’e isa kami?
Afuuffee qilleensan guutitii barattootatti agarsiisuun barannoo waliin walqabsiisi.
Yaad- rimee barattootatti himuun mata-duree barannoo biraatti darbi.
Ibsa gabaabaa kennuun barattoonni akka yaadannoo fudhatan taasisi.
Garee uumuun barattoonni qilleensi iddoo qabachuu fi qabachuu dhiisuu isaa irratti akka marii gaggeessan taasisi
sq 77. Qabeen jajjaboo boca sirnaawwaa hinqabnee osoo boca isaa hinjijjiirin akkamitti safaramuu danda’a?
Kallattumaan madaallii hangaa fayyadamuu
Kallattumaan siliindarii safaraa fayyadamuu
Al-kallattiin dhangala’oo keessa buusuun dhangala’oo iddoo isaa bu’e safaruu
Alkallattiin sarartuu fayyadamuu
sq 78. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu makaa miti?
sq 79. Kaarboondaayoksaayidiin kan hin faayyadne
Nyaata biqiloota qopheessuuf
Dhugaati lallaafaa qopheessuuf
sq 80. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu amala qilleensaa miti?
Bakka bakkaatti socho’uu
Maayikirooskoppiin mul’achuu danda’u
sq 81. Maaterii ta’u kan hin dandeenye
sq 82. Ruqoolee qilleensaa keessaa qabiyyee guddaa kan qabu
sq 83. Kanneen armaan gadii keessaaatamoota waa’ee Atamoonnii ilaalchisee isa kamtu sirrii miti?
Niwuutirootoota chaarjii poozativii dha
Pirootoonoota chaarjii poozativii dha
Elektiroonoota chaarjii negativii dha
sq 84. Qaama bishaani ta’ee bishaan qulqulluu keessatti kan hammaatu
sq 85. Jabinaa bishaanii hir’isuuf waanti nuti itti daballu
sq 86. Faayidaa ashaboo kan hin taane
Meeshaalee ijaarsaaf oola
sq 87. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu dogongora?
PH’n bishaanii 7 dha B
PH’n asiidotaa 7 gadi
PH’n beezotaa 7 gadi
Haayiroojiinoksaayidiin beeziis asiidiis miti
sq 88. Asiidiin garaachaa namaa keessatti argamu
Haayidirookiloorikii asiidii D
sq 89. Kanneen armaan gadii keessaa hiima isa kamtu sirriidha?
Asiidonni oksaayidoota sibiilaa fi bishaan irraa uumamu
Bishaan roobaa bishaan laafaadha
Beezonni oksaayidoota sibilaalaa fi bishaan irraa uumamu
Bishaan molokiyuulii orgaanikii dha
sq 90. Gaaffiin kun diyaagiramii armaan gadii irratti hundaa’a: Cabbii —A—> Bishaan —–X —->Hurka; Qubee “A” fi “X” diyaagiramii armaan olirratti walduraa duubaan ___ fi _____ bakkabu’u.
Qabbaneessuu fi ho’isuu
Ho’isuu fi hurkisiisuu
Hurkisiisuu fi qabbaneessuu
sq 91. Bishaan kan faalamu danda’uu
Balfa mana jireenyaa keessaa ba’uun
sq 92. Faalamu bishaaniin kan dhufu miti
Fayyummaan namaa fooyya’uu
Qabiyyeen oksijinii bishaan keessatti hir’achuu
Walhormaanni orgaanizimoota bishaan keessaa jiraatanii dabaluu
Biqiloonni qaama bishaanii keessatti haalaan lalisuu
sq 93. Gaazoota armaan gadii keessaa ol-ka’iinsa ho’aa addunyaaf gahee gad-aanaa qabu isa kami?
sq 94. Dhukkubota armaan gadii keessaa kamtu walqunnamtii saalaantiin daddarba?
sq 95. Kanneen armaan gadii keessaa kan qilleensa hinfaalle isa kami?
Aara warshaa keessaa bahu
Aara konkolaataa keessaa bahu
Oksijiinii yeroo footooseenesiisii biqilootarraa bahu
sq 96. Mala dhukkuba infuleenzaa ittisuu kan hintaane isa kami?
Qulqullina naannoo ofii eeguu
Namarraa garagalanii qufa’uu
Namni dhukkubsata fi fayyaan waliin jiraachuu
Meeshaalee dhukkubsataan itti gargaarame kophaatti baasuu
sq 97. Qilleensi adeemsa footooseenteesisii gaggeessuuf barbaachisu isa kami?
sq 98. Qabattoota fiizikaalaa keessaa kan qilleensaan walqabatu isa kami?
sq 99. Ga’ee qilleensaa kan hintaane isa kami?
Sanyii biqilootaa tamsaasuu
Sanyii akka biqilu gargaaruu
sq 100. Albuudota armaan gadii keessaa kan biqiloonni fi bineeldonni kallattiin itti fayyadamuu hindandeenye kami?
sq 101. Dhiibbaan kaarboon-daayioksaayidiin qilleensa keessatti baay’achaa dhufu agatisiisuu isaa kami?
sq 102. Kan armaan gadii keessaa mallii bishaan qulqulleessuuf hingargaarre isa kami?
Kilooriinii itti naquu
sq 103. Dhukkuboota armaan gadii keessaa kan bishaaniin daddarbu isa kami?
sq 104. Faayidaa kilooriinii bishaanitti naquu kan ta’e isa kami?
Keemikaalota summaa’oo bishaan keessaa balleessuuf
Jarmoota bishaan keessaa ajjeesuuf
Qilleensa bishaan keessaa baasuuf
Wantoota jajjaboo bishaan keessaa calaluuf
sq 105. Kan armaan gadii keessaa qulquullina dhuunfaa eeggachuu kan hintaaane kami?
sq 106. Amala biqiltuu kaarrolee kan ta’e kami?
Kilooroofiilii qabu B
Baalaa,jirmaa fi hidda qabu
sq 107. Kan armaan gadii keessaa tokko biqiloota daraaraa keessatti hin mul’atu
sq 108. Kamitu amala baalaa hinagarsifne?
Battee fi diriiraa ta’uu
sq 109. Qaamni biqiltuu walhormaata alsaalessaatiif hintajaajille isa kami?
sq 110. Hoormoonii biqilootaa kan hintaane kami?
sq 111. Kanneen armaan gadii keessaa caasaa hargansuu allaattotaa kan hintaane kami?
sq 112. Bineeldi hoomootarmisii hintane kami?
sq 113. Kanneen armaan gadii keessaa caasaan sochii Pilaasmoodoyeemii kami?
sq 114. Maqaan saayinsaawaa“Muskaa demoostikaa” organzimii kamitu ittiin beekkama?
sq 115. Dameen baayoolojii akkaataa qaamni biqilootaa fi bineeldotaa itti hojjatu qo’atu isa kami?
sq 116. Dhukkuboota armaan gadii keessaa kan baakteeriyaan hindaddarbine kami?
sq 117. Kanneen armaan gadii keessaa qoodama lafee guutuu namaa kan hintaane isa kami?
sq 118. Faayidaa lafee kan hintaane kami?
Qaamota lallaafaa miidhaarraa ittisuu
Seelota dhiigaa oomishuu
Qaama utubuu fi sochii
sq 119. Ati bishaan baay’ee dheebotte turte, garuu bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenye. Haata’u malee takka turte garuu miirri dheebuu sirra badeera.Haala kana mijeessuuf hormooniin ga’ee taphatekami?
sq 120. Caasaa sirna walhormaata dhiiraa keessaa kan isparmii omishu kami?
Ujummoo vaas deferansii
sq 121. Adeemsa sagalee dhaga’uu keessatti sagaleen naannoorraa sammuu dhaqabuuf caasaaleengurraa alaa gara keessaatti sagalee daddabarsan duraa duubaan kan qabate isa kami?
Morgaa→Ujummoo ala gurraa→lafeewwan xixiqqoo→dibbee gurraa→maramee→narvii dhageettii→sammuu.
Morgaa→Ujummoo ala gurraa→dibbee gurraa→maramee→lafeewwan xixiqqoo →narvii dhageettii→sammuu.
Morgaa→Ujummoo ala gurraa→dibbee gurraa→lafeewwan xixiqqoo→maramee→narvii dhageettii→sammuu.
Morgaa→dibbee gurraa →Ujummoo ala gurraa →lafeewwan xixiqqoo→maramee→narvii dhageettii→sammuu.
sq 122. Baalchaan osoo bosona keessaa muka muraa jiru leenci itti dhufe.Innis baay’ee rifate.yeroo muraasaan booda muka isa bira jiru irra koree of arge.Garuu akkamitti akka koru danada’e hin beekne .Hoormooniin Baalchaan sochii akkasiitiin muka korsiisuu danda’e kami?
sq 123. Niwurooniin dhaamsa deebistuun dhaamsa narvaawaa isaa_______tti dabarasa.
sq 124. Qabiyyee baqqaana ippidarmisii keessatti kan argamu kami?
sq 125. Qaama usaansaa fi dalaggaan isaa kan wal hingitne isa kami?
Kalee -yuuriyaa dhabamsiisuu
Gogaa- dafqa dhabamsiisiisuu
Somba –kaarboondaayoksaayidii dhabamsiisuu
sq 126. Kan armaan gadii keessaa kamituu lafee keessoo qaba?
sq 127. Faaltota qilleensaa armaan gadii keessaa isa kamtu adeemsa fotoosinteesisii gaggeesuuf tajaajilaa?
sq 128. Adeemsi qilleensa gara keessaatti fudhachuu qilleensa gara alaatti baasuu irraa adda godhu isa kami?
Hir’achuu qabee qomaa
Diriirfachuu maashaalee cinaachaa keessaa
Dabaluu dhiibbaa qilleensaa somba
sq 129. Kanneen armaan gadii keessaa tartiibni sirrii qilleensa alaa gara sombaa seenu agarsiisu isa kami?
Ujummoo qilleensaa Biroonkasii Biroonkiyoolasii Afuuffee qilleensaa funyaan
Funyaan Ujummoo qilleensaa Biroonkasii Biroonkiyoolasii Afuuffee qilleensaa
Biroonkasii Afuuffee qilleensaa Biroonkiyoolasii Ujummoo qilleensaa funyaan
Funyaan Afuuffee qilleensaa Biroonkiyoolasii Biroonkasii Ujummoo qilleensaa
sq 130. Gaasota qilleensaa armaan gadii keessaa isa kamtu respaayireeshinii seelii keessaatiif fayyadaa?
sq 131. Kanneen armaan gadii keessaa tokko teeknooloojii naannoo wajjin kan mijaa’ina qabu isa kami?
Ifa aduu akka madda anniisaatti fayyadamuu
Cilee akka madda anniisaatti fayyadamuu
Meeshaa qabbaneessaa (refrigerator) hayidirookaarbonii gadi lakkisu fayyadamuu
Qoricha farra ilbiisotaa fayyadamuu
sq 132. Namoonni lafa olka’insa qaburra jiraatan namoota lafa dakee irra jiraatan caalaa seelota dhiiga diimaa baay’ee qabu. Kanaafis sababa kan ta’u, qilleensi lafa olka’insaarra jiru:
Qabee qilleensaa kenname tokko keessatti oksijinii baay’inaan qabaachuu
Qabee qilleensaa kenname tokko keessatti oksijinii xiqqeenyaan qabaachuu
Qabee qilleensaa kenname tokko keessatti kaarbondaayoksaayidii xiqqeenyaan qabaachuu
Qabee qilleensaa kenname tokko keessatti kaarbondaayoksaayidii baay’inaan qabaachuu
sq 133. Gaasota armaan gadii keessaa kan somba keessaa gara alaatti gad-lakkifamu isa kami?
sq 134. Ruqoolee tambooxuuxuu armaan gadii keessaa isa kamtu dhiiginsa sammuu keessaa(stroke)f sababa ta’aa?
sq 135. Kanneen armaan gadii keessaa rakkooleen hargansuu tamboo xuuxuudhaan kan dhufu isa kami?
sq 136. Somba keessatti, iddoon wal-jijjiirraa gaasotaa itti geggeeffamu eessa?
sq 137. Dhibeewwan bishaaniin daddarban armaan gadii keessaa isa kamtu keessummeessituu giddu-galeessaa barbaadaa?
sq 138. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu faalama bishaanii maatii keessatti nama qunnamu qulqulleessuuf caalmaatti bu’a qabeessa?
Kiloorinii itti naquu
sq 139. Magaalota keessatti maddi faalama bishaanii kanneen armaan gadii keessaa irra caalaa isa kam ta’aa?
Keemikaala farra ilbiisota
sq 140. Kanneen armaan gadii keessaa dhukkuboota bishaaniin daddarban ittisuuf kan gargaaru isa kami?
Shurraaba harka dheeraa uffachuu
Kuduraa fi fuduraalee nyaachuu
Mana fincaanitti sirnaan fayyadamuu
sq 141. Qaamota biqilootaa kanneen armaan gadii keessaa wal-hormaata vejiteetivii geggeessuuf kan gargaaru isa kami?
Qaama hormaata dhiiraa
Qaama hormaata dhalaa
sq 142. Amalli addaa saaphaphuu fangasoota irraa adda taasisu isa kami?
Biqiloota daraaraa qabeeyyii ta’uu
Biqiloota jiminoospermootaa ta’uu
sq 143. Adeemsa wal-hormaata biqilootaa keessatti, qaamni kormaa daraaraa biqilaa keessaa yoo dhabamsiifame, biqilicha irratti dirqama maaltu uumamuu danda’aa?
Hormaata hin geggeessu B
Of-poolaneessuu hin danda’u
Of-poolaneessuu ni danda’a
Hormaata ni geggeessa
sq 144. Coommeen gareewwan armaan gadii keessaa isa kam jalatti ramadama?
sq 145. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu xaafii polineessuuf gargaaraa?
sq 146. Biddoolleen qurxummiilee kanneen armaan gadii keessaa isa kami?
sq 147. Daawwataa tokko bineensa Waaliyaa (Walia ibex) jedhamu daawwachuuf fedhii kan qabaatu yoo ta’e, kutaa biyya keenyaa isa kam deemee akka daawwatu gorsitaa?
Gaarreewwan Baalee B
Haroowwan sulula keessaa
Gaarreewwan Kaaba Itoophiyaa
Paarkii biyyaalessaa Awwaash
sq 148. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtuugochaawwan bineensota adamsitootaa kunuunsa biqiltoota keessatti qooda qaba?
Sanyiiwwan biqilootaa murtaawaa ta’an soorachuu
Lakkoofsa soorattoo margaa (heerbiivoresootaa) gad-xiqqeessuu
Biqiloota barbaachisoo hin taane soorachuu
Herbivoresoota naannoo sanaa dhabamsiisuu
sq 149. Kanneen armaan gadii keessaa sirrii tartiiba metaamorfoosisii guutuu isa kamtu agarsiisa?
Ga’eessa Jiisaa Hanqaaquu Puppaa
Puppaa Jiisaa Ga’eessa Hanqaaquu
Hanqaaquu Jiisaa Puppaa Ga’eessa
Jiisaa Puppaa Ga’eessa Hanqaaquu
sq 150. Caasaalee armaan gadii keessaa isa kamtu amala hoosiftootaa bakka bu’aa?
sq 151. Amaloota anaatomii allaattiiwwanii armaan gadii keessaa isa kamtu balali’uu isaaniitiif gargaarsa godhaa?
sq 152. Dhukkuboota namaa baakteeriyaan daddarban keessaa wal-qunnamtii saalaatiin daddarbu isa kami?
sq 153. Kakaasa armaan gadii keessaa isa kamtu gogaa namaatiin wal-faana hin deemu?
sq 154. Yammuu kutaa barnootaa keessatti baayoloojii barattu, kutaa sammuu kee isa kam fayyadamuudhaan yaadarimeewwan yaadattaa?
sq 155. Kanneen armaan gadii keessaa sirriitti mudoo qaroo fagootiif sababa ta’a isa kami?
Wulleen ijaa gabaabbachuu B
Wulleen ijaa dheerachuu
Leensiin jabina qabaachuu
Wantoon gabaabaa ta’uu
sq 156. Sirni narvii moggaa kan qabatu:
Ispaayinaal koordii fi sammuu
Narvoota ispaayinaalii fi kiraaniyaalii
Serebireemii fi hayipotalamasii D
Serebileemii fi Meedullaa obilongaataa
sq 157. Ruqoolee qilleensa armaan gadii keessaa hamma wal qixa ta`een qilleensa gara keessaa fi alatti harganamuu isa kami?
sq 158. Adeemsawwan armaan gadii keessaa hamma oksijinii atmosfarii keessaa kan dabalu isa kami?
Gubama soorataa B
Hundu deebii dha
sq 159. Ruqoolee qilleensa armaan gadii keessaa oksijinii keessaa hambisuun nyaata saamsuu fi yeroo dheeraa tursiisuuf gargaaru isa kami?
sq 160. Caasaa sirna hargansuu armaan gadii keessaa amtu sombaatti dhiyaate argama?
sq 161. Isa kamtu faayidaa karaa funyaaniin harganuu ti?
Harganuuf anniisni barbaachisu muraasadha.
Qilleensa jiisuu fi ho`isuuf
Saffisa guddaan qilleensa ol fudhachuuf gargaara
Qilleensa baay`ee ol fudhachuuf gargaara
sq 162. Kutaa somba bakka adeemsi gocha ijo ittii raawwatamu kami?
sq 163. Caasaalee armaan gadii keessaa nyaata gara ujummoo qilleensatti akka hin sennee dhorku kami?
sq 164. Dhukkuboota armaan gadii keessaa dhukkubin qilleensa faalameen daddarbu isa kami?
Daranyoo sombaa (TB)
sq 165. Gocha taarii tamboo xuuxamuu keessaa jiru agarsiisuuf; maashinii tamboo xuuxuu huccuu kotoonii adiin qadaadame tokko, sababa kufama taariitiin halluun huccuu gara daanguleessatti jijjiirama. Taateen kun qaama nama tamboo xuuxuu isa kamirraa dhibba geessisa?
sq 166. Lubbu qabeeyyii armaan gadii keessaa isa kamtu bishaan baay`ee qaama isaa keessaa qaba?
Tishuu biqiltuu dagaaguu
sq 167. Qaama Lubbu qabeeyyii keessatti faayidaa bishaanii kan hin taane isa kami?
Hoo`a qaama to`achu
Seelii keessaa wantoota geejjiibuu
Rigata lafee jiddu hir`isu
Deebii hin qabu
sq 168. Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa bishaan biqilootaaf kennu isa kami?
sq 169. Dhukkuba sababa bishaan maakiroo origaanizimootan faalamee dhuguun nama qabu isa kami?
sq 170. Dhukkuba bishaan faalameen hin daddarbine isa kami?
sq 171. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu adda?
sq 172. Kanneen armaan gadii keessaa faayidaa biqiloota kan hin taane isa kami?
Hamma kaarbondaayoksaayidii atimosfarii keessaa jiru xiqqeessu
Hamma oksijinii atmosfarii keessaa jiru xiqqeessu
Dhiqama biyyee ittisu
Marsaa bishaanii geggeessuu
sq 173. Caasaa sanyii nyaata kuusuuf gargaaru maal jedhama?
sq 174. Biqiltuu miti tishuu vaaskulaaraa fi sanyii maleeyyii ta`e isa kami?
sq 175. Wal hormaata armaan gadii keessaa kan adda ta`e isa kami?
sq 176. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu fakkeenya hawaasa ilbiisota ti?
sq 177. Bineeldota armaan gadii keessaa dachee irraa hedduminaan argamu fi milka`oo ta`e argamu isa kami?
sq 179. Ilbiisota armaan gadii keessaa kochoo kan hin qabne isa kami?
sq 180. Bineeldoonni kan akka qurxummii, amfibiyaansii, reppitaayilii, allaattiiwan fi hosiftoota amala waliin qaban maal?
Ho`a qaama garagara qabaachu
Ho`a qaama dhaabbata qabaachu
Lafee dugda qabaachu
sq 178. Allaattiiwwan fi Hosiftoota wanti isaan walfakkeessuu maal?
Ho`a qaama dhaabbata qabu B
Fartilaayizeeshinii qaama keessatti geggeessu
Onnee gola afur qabu
sq 181. Kanneen armaan gadii keessaa isa kamtu invertebireetiidha?
sq 182. Kanneen armaan gadii keessaa kan qaama ilbiisotaa keessaatti argamu kami?
A fi C
sq 183. Adeemsa xuraawa metaabolizimii qaama keessaa dhabamsiisuun maal jedhama?
sq 184. Kanneen armaan gadii keessaa dandeettii dubbachuu, yaadachuu fi hubachuun keessatti kan gahee qabu kami?
sq 185. Kaannen armaan gadii keessa kamtu waa’e aannisaa hubannoo dogongoraati jette yaadda?
Wantootni lubbuu dhabeeyyii fi lubbuu qabeeyyii lamaanuu anniisa qabu.
Anniisaan kan uummamu gocha raawwachuun.
Boba’aan madda anniisaati malee ofii isaatiin anniisaa miti.
Anniisaan hariiroo yabbiina qaamaa waliin hin qabu.
sq 186. Barataan kutaa 4ffaa faalkaa fiizikaalaa wanta ykn iddattoo kennameef tokko adda baasuufqorannoo gaggeesseen wantichi qabee murtaa’aa, rukkina olaanaa fi dandeettii yaa’uu akkaqabu mirkaneesse. Faalkaa fiizikaalaa fi sababa isaa ilaalchise kanneen armaan gadii keessaakan sirii ta’e kami?
Wantichi jajjaboo dha, sababni isaas boca murtaa’aa fi rukkina olaanaa waan qabufi dha.
Wantichi dhangala’oo dha, sababni isaas qabee murtaa’aa fi rukkina olaanaa waan qabufidha.
Wantichi jajjaboo dha , sababni isaas qabee murtaa’aa qabaachuu fi salphaatti yaa’uuisaati.
Wantichi dhangala’oo dha, sababni isaas qabee murtaa’aa qabaachuu fi salphaatti yaa’uuisaati.
sq 187. Jijjiiramoota maaterii barsiisuuf malleen baruuf barsiisuu jiran keessa irra caalaatti filatamaafi bu’a qabeessa kan ta’e isa kami?
sq 188. Kanneen armaan gadii keessa tokko caasaa fi amaloota garaagaraa irratti hunda’uun wantoota haala walfakeenya fi garagaarummaa isaaniin ka’uuf kan oluu mala saayinsawwa keessaa isakami?
Qinddeessu ykn raamadu
sq 189. Kaannen armaa gadi keessa kamtu yaada waligala saayinsaawa dha.
Bishaan qulqulluun dirra galaanaa irratti 100 0C dhibba irratti danfa.
Elektriksiitiin hojii hojjechuuf nu gagaara.
Bishaan molekiyuulii atoomii haayidiroojinii fi oksijinii irra uumama.
Sanyii bineeldota addunyaa kana keessaa ilbisotni %75 qabatu
sq 190. Kaannen armaan gadi keessa kamtu faayida itti fayyadama leecaalloo naannoo irraaargamuun baruuf barsiisuun faayidaalee peedaagojawaaf dinagdaawaa miti?
Muuxannoo harka duraa ykn kallattii naannoo fiizikaalaaf hawaasaa dhiyeessuu.
Marsaa fi irra deebiin fayyadamu hin jajjabeessan
Baasii Xiqqeessuu ykn hambisuu kanaaf turtii guddisa
sq 191. Kan armaan gadii keessaa kaayyoon baruu barsiisuu irraatti xiyyeeffachuu kan hinqabnekami?
sq 192. Waa’ee si’aayinaan barachuu barattoota ilalchisee kamtuu sirii miti?
Barnootaa hirmaachiisaa fi hawwataa taasisa
Carraa hojjeechuun barachuu ni uuma
Gochaa baratootaa irraa gochaa barsiisaatuu yeroo dheeraa fudhata
Barsiisaan haala mijeessaa dha
sq 193. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu mala barataa giddugaleeffate miti?
Mala yaada maddisiisuu
Mala gahee taphachuu
sq 194. Faayidaa meeshaa deggarsa barnoota kan hintaan ta’e kami?
Barnoota si’eessaa fi hawwataa taasisa
Barnoota qabatamaa gocha C
Yeroo fi human qusata
Barsiisaa bakka bu’ee tajaajjiluu danda’a
sq 195. Kaneen armaan gadii keessaa kamtu meeshaalee agaree-dhageetii ti?
Filmii sagalee malee
sq 196. Baruu-barsiisuu keessatti fayidaan karooraa kan hintaane kami?
Ofitti amananummaa barsiisaaf dabala
Irra deebiiqabiyyee hambisa
Hojii baruu barsiisuu qinda’awaa taasisa
Qabiyyee baratamu alaa akka barsiisan gargaara
sq 197. Iyyannoon xumura irratti gaggeefamuu maaliif gargaara?
Galma ga’insa kaayyoo barnoota mirkaneessuuf
Yaadqalbii barattoota gara barnootaatti fiduuf
Barnoota darbee fi isaa haaraa walqabsiisuuf
Adeemsa barachuu barattoota to’achuuf
sq 198. Daa’imman saayinsii naannoo yoo barsiiftu kan wal simsiisuuhinqabne isa kami?
Gaaffilee gaafataman naannoo isaanii waliin wal-qabsiisuu
Barnoota muuxannoo isaanitiin walqabsiisuu
Barnootichi muuxannoo alkallattiitiin walqabsiisuu
Ilaalcha saayinsawaa akka qabatan haala mijeessuu
sq 199. Kamitu addeemsa ogummaa saayinsawaa barachuu daa’immanii ti?
sq 200. Ogummaa saayinsawaan daa’imman daree 1ffaa barachuuf itti ulfaatu isa kami?
sq 201. Saayinsii barachuun daa’immanii kan irratti hin hundoofne isa kami?
Haala isaan itti yaadan
Haala yaada isaanii itti ibsatan
Haala yaad- rime wal -xaxaa itti hiikan
sq 202. Sababni daa’imman saayinsii yoo baratan hubannoo dogoggoraa akka qabatan hintaasifneisa kami?
Dandeettii afaanii daanga’aa qabaachuu
Muuxannoo daanga’aa qabaachuu
Yaad-rimee barsiisaan barsiisu salphaatti qabachuu
Hiikni wantootatti kennan garaagara ta’uu
sq 203. Malli hubannoo dogoggoraa daa’immanii sirreessuuf barsiisaa gargaaru isa kami?
sq 204. Barsiisaan karoora hin qabne, ____hin beeku
Akkamitti akka barsiisu
Maal akka barsiisu
Maaliif akka barsiisu
sq 205. Karoorri barannoo dirqama kan irraatti hunda’uu qabu
Jiraachuu meeshaalee barnootaa
sq 206. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu bu’aa karoora barannoo sirriitti qopha’ee miti?
Barsiisoonni qabiyyee barnootaa akka hubatan gargaara
Barsiisoonni waan hojjetan irraatti ofitti amantummaa akka qabataniif gargaara
Walabummaan barsiisu barsiisotaa gadi buusuuf gargaara
Hoggansaa daree barnootaa gahaa ta’e barsiisoonni akka horataniif gargaara
sq 207. Kanneen armaan gadii keessaa karoora barannoo keessatti kan hin hammatamne kami?
Galma bira gahamu
Daree barnootaa keessatti gochaa fi tartiiba ittin raawwatamu
Waan barattoonni barachuu qaban
sq 208. Xumuraa barnoota kanaatti barattoonni ilbisoota ni tarreessuu. Hanqinni kayyoo barannoo kanaa
sq 209. Kanneen armaan gadii keessaa tokko hiikkaa barachuuti
Dagagina fiizikaalaa fi baayoloojikaalaa qaama fi kutaa qaamoolee
Jijjirama amala hamma tokko yeroo dheeraaf turu
Jijjirama uumamaan akka umurriin dabaleen mul’atu
sq 210. Adeemsa barachuu keessatti ogummaan yaadu beekumsi “akkamittiin fi maaliif” jedhu maal jalatti ramadama?
sq 211. Gochawwaan armaan gadii keessaa isa kamtu barattoonni amala gaarii akka horaatan taasisaa?
sq 212. Gochaan barachuun kan gaggeeffamuu ———————
daree barnootaa alaatti
mana yaalii keessatti
dirree mana barumsaa keessatti
sq 213. Muxannoon barsiisuu/maalli barsiisuu kan argamu
Yeroo leenjiitti barsiisaan kan gonfatuu
Fedhii barsiisaan ofiin qabu
Fedhii mana barumsaa/ hawaasaa
sq 214. Hoggansa daree kan hammatu
To’annoo daree barnoota mirkaneeffachuu
Amala fi gocha barataa hordofuu
Haala daree barnootaa fooyyeessu
sq 215. Kanneen armaan gadii keessaa tokko amalleeffannaa gaarii gosa hoggansa daree barnoota dha.
Maqaa barattoota awallalluu
Jechoota hiikkaa malee fayyadamu
Gaaffiileef haala sirnawwaan deebii kennu
Karoorsuu fi qopha’uu dhabuu
sq 216. Qaamoolee daraaraa daree barnoota keessatti agarsiisuuf kanneen keessa gosti habaaboo filaatama ta’e
sq 217. Adeemsi barsiisuu bu’aa qabeessa ta’e kan gaggeeffamu
waan hin beekamne irraa gara waan beekamutti
walxaxaa irraa gara salphaatti
dhiyoo irraa gara fagootti
qabtamaa kan hin taa’in irraa gara qabtamaatti
sq 218. Sansaakan barsiisaa dirqama
dandeetti gidduu galeessaa ol qabachuu
fayyaa bulleessaa fi miidhagaa ta’uu
sq 219. Kanneen armaan gadii keessaa tokko adeemsa baruu-barsiisuu bu’aa qabeessaa ta’e daree barnoota keessatti gaggeessuuf xiyyeeffannaa argachuu kan qabu kami?
muxannoo barattoonni dura qabanitti gargaaramuu
miidiyaa hiikka qabeessa ta’etti gargaaramuu
garaagarummaa dandeetti barattoota hubachuu
sq 220. Kanneen keessaa tokko meeshaa madaalliin ittin gaggeeffamu miti?
Gabatee gurrachaa qulqulleessuu
sq 221. Malli iyyaafannaa baayyee gaarii ta’e marii al-tokko keessatti furmaata ataatamaa fiduf gargaaru
Waan baratee iyyaafachuuf
Iyyaafannoo akka baratee
sq 222. Isa kamtu tartiiba sirriidha?
Iyyaafannaa Gocha Madaallii
Madaallii Gocha Iyyaafannaa
Iyyaafannaa Madaallii Gocha
Gocha Madaallii Iyyaafannaa
sq 223. Amaloota barataan barsiisota abbaa irree irraa horaatu agarsiisa tokko malee
Jibaa fi lola hiriyootaa daggagaafachuu
Hojii garee keessatti kakaa’umsa dhabuu
sq 224. Adeemsa baruu-barsiisuu keessatti iyyaafannaan kan gaggeeffamu
sq 225. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu makaa miti?
sq 226. Qabiyyee qilleensaa armaan gadii keessaa qilleensa olfudhatamuufi qaama keenya keessaa ba’u keessatti kamtu hin jijjiiramu?
sq 227. Kaarboondaayoksaayidiin kam keessatti hin fayyadu?
Qophii soorata biqilootaaf
Qophii dhugaatii lallaafoof
sq 228. Kanneen armaan gadii keessaa amala qilleensa kan hin taane:
Bakka bakkaatti sochoo’uu
Maayikirooskooppiin ilaalamuu danda’a
sq 229. Adeemsa armaan gadii keessaa kamtu hamma oksijiinii dabala?
sq 230. Qabiyyeewwan qilleensaa armaan gadii keessaa kan saamsama nyaataa guutuun oksijiinii dhabamsiisuunfi turtii nyaataa dheereessuuf oolu?
sq 231. Kamtu maateerii miti?
sq 232. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu amala sibiilotaa miti?
Merkurii malee hunduu jajjaboodha
Dabarsoo ho’aafi elektiriikaa gaariidha
Uumaman shubeeffamuufi battachuu danda’u
Haala salphaan caccabuu danda’u
sq 233. Qoomoolee haargansuu armaan gadii keessaa kamtu sonbaatti dhiyoodha?
sq 234. Qabiyyee qilleensaa keessaa kamtu baay’inaan argama?
sq 235. Faayidaan funyaaniin haarganuun qabu:
Humna xiqqaa barbaada
Qillensa ho’iisuufi jiisuu
Qilleensa hedduminaan argaachuuf
sq 236. Yoo waraqaa koobaalt kilooraayidii 3cm afaan keetti dhiyeesuun daqiiqaa 2-3 afuura yoo itti baafate waraqichi piinkii (daanguleessaa)tti jijjiirama.
Gochi kun qilleessi sombakeessaa ba’u maal qabaachuu isaa agarsiisa?
sq 237. Adeemsi baayyee barbaachisaan somba keessatti raawwatu eessatti gaggeeffama?
sq 238. Caasaalee qaamaa armaan gadii keessaa suudoowwan soorataa dandii qilleesaa akka hin seene kan dhorku isa kami?
sq 239. Agarsiisa araa tamboo taarii keessatti jirbii adii mashinii irratti hidhme sababa aara taarii sanaan halluun isaa garamagaalaatti jijjiiramee kuufamee argama. Taateen akkasii kunqaama namaa keessatti eessatti mul’ata?
sq 240. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu dabarsoo elektiriikaa miti?
sq 241. Kaareentii elektiriikaa(I) yeroo (t)murtaa’ee irratti chaarjii waliin shiboo dabarsookeessa yaa’uu foormulaan ittiin shalagamu kam?
sq 242. Chaarjiinii 600C qabu kaareentii 3A baatu dabarsoo keessa darbuuf yeroo hagamii itti fudhata?
sq 243. Meeshaan seerikutii dandii sirriitti qabsiifamee maal walqixa qabaata?
sq 244. Anniisaan kam irraa argamuu danda’a?
sq 245. Kannen armaan gadii keessaa balaa elektiriikaa dhabamsiisuuf of eeggannoo fudhatamu qabu kan ta’e kami?
Meeshaalee elektiriikaa golgaa hin qabne kamuu pilaastikiin golguu
Meshaalee elektiriikaa iddoo daa’imman hin geenye kaa’uu
Yeroo bokkaan roobu sirna elektiriikaa xuxuquu dhiisuu
sq 246. Walqunnamtii balbii daandii wal-tarree keessatti isa kamtu dhaabbataa ta,a?
sq 247. Annisaan elektirikaalaa haaromsamu kam irraa argama?
sq 248. Waa’ee atoomotaa ilaalchisee kamtu sirrii miti?
Niwuutiroonotni chaarjii pozeetiivii qabu
Pirootoonotni chaarjii pozeetiivii qabu
Elektiroonotni chaarjii nageetiivii qabu
sq 249. Lubbuu qabeeyyii armaan gadii keessaa kamtu bishaan hedduu qaama isaanii keessaa qaba?
Tishuulee biqiloota guddachaa jiranii
sq 250. Bishaan __________________fi_______________irraa uumamu.
Kaarboonii, Haaayidiroojiiniifi Oksijiiniimama
sq 251. Qaamni bishaanii bishaan haaraa jalatti ramadamu isa kamiidha?
sq 252. Gara-jabummaa bishaanii xiqqeessuuf maaltu itti dabalama?
sq 253. Ashaboon tajaajila inni ooluuf hin dandeenye:
sq 254. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirrii miti?
pH bishaanii 7 dha
pH asiidotaa 7 gadiidha
pH beezotaa 7 gadiidha
Bishaan asiidiis beeziis miti
sq 255. Asiidiin garracha namaa keessatti argamu isa kami?
sq 256. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sirriidha?
Asiidootni oksaayidoota sibiilawoofi bishaan irraa uumama
Bishaan bokkaa bishaan gara laafessaadha.
Beezotni oksaayidoota sibilaalawoofi bishaan irraa uumama
Bishaan molaakiyulii orgaanikiiti
sq 257. Kanneen armaan gadii keessaa fayyidaa bishaan orgaanizimootaaf kennu miti?
Walrigiinsa buusawwanii hir’isuuf
sq 258. Kannen armaan gadii keessaa tokko faayidaa bishaan biqilootaaf kennuudha.
sq 259. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu dhukuba bishaan faalameen nama qaba?
sq 260. Bishaan maaliin faalama?
Koosiiwwan mana keessaa gatamuun
Koosiiwwan haftee qonnaa irraa gatamuun
sq 261. Bishaan faalame maal fidaa?
Fayyummaa namaa fooyyeessa
Hamma oksijiinii bishaan keessaa xiqqeessa
Walhormaata lubbuu qabeeyyii bishaan keessaa dabala
Humnaa ol baayyachuu biqilootaa bishaan keessatti
sq 262. Kanneen armaan gadii keessaa olka’iinsa ho’a addunyaaf gaasiin gahee xiqqaa qabu kami?
sq 263. Kanneen armaan gadii keessaa dukkubni bishaan faalameen hin dhufne kami?
sq 264. Kanneen armaan gadii keessaa isaan biroo waliin haariiroo xiqqaa kan qabu kami?
sq 265. Bu’aa biqilootaa kan hin taane kami?
Kuufama kaarboondaayooksaayidii atimoosfeerii keessaa xiqqeessuuf
Kuufama oksijiinii atimoosfeerii keessaa xiqqeessuuf
Dhiqama biyyee hambisuuf
sq 266. Caasaan sanyii iddoo itti nyaatni keessatti kuufamu maal jedhama?
sq 267. Biqilootni sanyiimaleeyyiifi vaskuularaawaa hin taane isa kam?
sq 268. Malleen wal-hormaata armaan gaii keessaa adda kan ta’e kami?
sq 269. Kanneen armaan gadii keessaa fakkeenya ilbiisota gamtaa qaban isa kami?
sq 270. Garee bineeldoota sanyii heddumina olaanaa qabaniifi lafa irratti mikaa’oo ta’an isankami?
sq 271. Sibiiroonnifi hoosiftootni sababiin isaan walfakkataaniif:
Ho’a qaamaa dhaabbataa waan qabaniif
Feertalizeesshiinii keessoo waan gaggeessaniif
Gola onnee afur waan qabaiif
sq 272. Ilbiisota armaan gadii keessaa kaattuu kan hin qabne kami?
sq 273. Qurxumiiwwaan, amfiibiyaanooni, reptaayiloota, sinbiroowwaniifi hoosiftootni amaloota waliin qaban kan ta’e kami?
Ho’a qaamaa dhaabbataa hin taane qabaachuu
Ho’a qaamaa dhaabbataa qabaachuu
Lafee dugdaa qabaachuu
sq 274. Kanneen armaan gadii keessaa kan lafee dugda hin qabne jalatti ramadamu kam?
sq 275. Ilbiisootni maal qabu?
sq 276. Marsaa jireenyaa titiisaa sirrii ta’e kami?
sq 277. Dandeettii ijaa hanga leensii jijjiiruun wantoota fagoofi dhiyoo irratti arguuf maal jedhama?
sq 278. Namootni yemmuu ummuriin dabala rakkoo ijaa qaroo dhiyoo godhatu. Namoota akkasiif fullee ijaa isa kam akka godhatan gorfamu?
Leensii sasaabduu ifaa
sq 279. Namootni tokko tokko halluun ija isaanii gurraacha, kan biroon immoo cuquliisa. Sababni halluuwwaan ija kanaa adda adda ta’uu danda’eef:
sq 280. Sochiin ifaa haala isa kam keessatti xiqqaachaa adeema?
Burcuqqoo irraa qilleensatti
Cabbii irraa gara bishaaniitti
Pilaastikoota irraa gara qilleensaatti
Vaakiyuumii irraa gara qilleensaatti
sq 281. Amaloota ifaa keessaa kamtu fakkaatti kee daawwitii keessatti akka argitu si gargaara?
sq 282. Waa’ee anniisaa kamtu dhugaadha?
Aduun madda anniisaa isa jalqabaati
Anniisaan hin uumamus hin baduus
Biqiloototni anniisaa soolaarii gara anniisaa keemikaalaatti jijjiiru
sq 283. Kanneen armaan gadii keessaa qaama usaansaa jalatti kan hin ramadamne isa kami?
sq 284. To’annoo hamma giluukoosii dhiiga keessa jiru keessatti hormoonotni faallaa walii hojjeetan:
sq 285. Adeemsi xuriiwwaan meetaaboolawaa qaama keessaa dhabamsiisuu maal jedhama?
sq 286. Dubachuufi yaaduun kam wajjiin walitti hidhata?
sq 287. Sirna soolaarii keessatti pilaaneetiin merkuriitti antee argamtu:
sq 288. Aduun caalmaatti maal irraa uumamti?
Oksijiiniifi Haayidiroojiinii B
sq 289. Sababa lafti aduutti naannootuun yeroon itti guyyaafi halkan walqixa ta’an yoomi?
sq 290. Jiini yemmuu lafaafi aduu gidduu taatu maaltu ta’a?
Gaddidduu lafaa D
sq 291. Lafti siiqqee ishee irra kan naannoftu?
Bahaa gara lixaatti
Kabaa gara kibbaatti
Lixaa gara bahaatti
Kaabaa gara bahaatti
sq 292. Beekumsi baraachuun argamu dhiibaa akkamii qaba?
Walitti dhufeenya hawaasummaa
sq 293. Adeemsi baruu-barsiisuu bu’a qabeessi kam irraa kamtti deemuu qaba?
Waan hinbeekamne irra gara isa beekamuutti
Waan qabatamaa hin taane irraa gara qabatamaatti
sq 294. Sansakni barsiisummaa kan ta’u qabu:
Dandeetti giddu galeessaa ol qabaachuu qaba
Obsaa ta’uu qaba
Fayyummaa qaamaafi haalatti madaaqaa
sq 295. Kanneen armaan gadii keessaa tartiibni sirriin isa kami?
sq 296. Adeemsa baruu-barsiisuu keessatti iyyaafannoon kan gaggeeffamu:
Adeemsa baruu-barsiisuu keessatti
Modeela COC Bara 2012 Muummee Saayinsii Qindaawaaf PDFDownload
1 thought on “Modeela COC Bara 2012 Muummee Saayinsii Qindaa’aaf”
Akkamittiin naan dubbisa naaf galuu dide?